Linux yaigona kukunda maWindows muvashandisi here? | Linux Vakapindwa muropa
Parizvino Windows ndiye mambo mune mushandisi quota, zvisinei, iyi mamiriro anogona kuchinja pamusoro pemakore mukufarira Linux
Nehurombo, sekuziva kwedu tese, Windows ndiyo mambo kana zvasvika kune desktop desktop share, zvisinei Linux anoshanda masystem dzakakurumbira kupfuura nakare kose uye ndosaka vazhinji vedu tichizvibvunza kana rimwe zuva tichikwanisa kuchinja matafura.
Windows ndiyo iyo yazvino musika anotonga ane anopfuura 90% emusika. Kana tikataura nezvenzvimbo yechipiri, inoenderana neApple uye yayo Mac OS X ine 12% uye pakupedzisira Linux iri munzvimbo yekupedzisira ine 4%. Kunyangwe kuwedzera zvese kusingabude 100%, iwe unofanirwa kufunga nezve huwandu hwevanhu vane maviri makomputa kana maviri bhutsu pamakomputa avo.
Kunyangwe vachiita kunge vashoma kwazvo manhamba, ndinotenda kuti kana Pane tariro iyo Linux inogona kuwedzera mugove wayo wemusika. Nharo dzandinotenda dzinodzivirira kushandiswa kweLinux ndedzinotevera.
Nei Linux yaigona kukunda Windows
Steam Machines: Sezvo isu tatoziva, michina iyi ine yekushandisa system yakaiswa Steam OS yeGNU / Linux. Icho chikonzero vazhinji vane Linux-vanoda majairi maviri-bhutsu Windows ndeyekuti ine yakawanda yakawanda mutambo katarogu kupfuura Linux. Zvisinei, nekusvika kwe Steam muchinas nhamba iyi vkukura zvakanyanya uye hazvizove zvichidikanwa kuve neWindows.
Waini: waini iyo ndeimwe yemapurogiramu akanakisa aripo eLinux. Chirongwa ichi chinotibvumidza kumhanyisa akajairwa Windows mafomu pane edu maLinux masisitimu.Nepo kunyangwe mumakore ekutanga yanga isingashande mushe, mazuva ano unogona mhanyisa matani eemaapps pasina chinorova.
Kuita kwepamusoro: Sezvatiri kuratidza mu chinyorwa ichi, Windows 10 mashandiro haana kunyanyoipa. Mazhinji masisitimu anoshanda anomhanya zvakanyanya kuwanda kupfuura sisitimu yeMicrosoft, kwete kuverenga iyo ane simba command command ane Linux, iyo kana iwe uchiziva mashandisiro ayo iwe une mhedzisiro kutonga pane zvese.
Windows inogona kuona iyo duster: Windows 10 haisi iyo yepamusoro sisitimu yekushandisa yavakavimbisa. Kutanga zvese izvi mashoko ekuba uye kushayikwa kwekuvanzika, kuverengerwa se malware neGNU, chechipiri kuti iwe unogona chaizvo kuita zvakada kufanana neWindows 7 uye 8 uye chechitatu zvikanganiso zvese zvainopa. Shanduko kubva Kernel 6 kuenda Kernel 10 yanga iri muzita chete.
Tsika: Sezvandambotaura mu chinyorwa ichi, kugadzirisa ndiko, kwekuravira kwangu, imwe yemasimba makuru eLinux. NeWindows iwe unofanirwa kugadzirisa kune yayo interface, iyo vamwe vashandisi vaneta. MuLinux une akawanda madhesiki aunogona gadzirisa kuda kuravira.
Mac haifambire mberi: Apple zvakare ine duster, makomputa avo anouya ne 600 euro Hardware asi inokosha 2000. Mugove wayo wemusika haupfuuri pane vanonzi "posh" vashandisi senge mamirionea kana vagadziri vemimhanzi, nekudaro inoramba yakadaro saizvozvo kwemakore mazhinji.
Ruzivo rukuru rwevashandisi: Pandaive mudiki, Windows chete ndiyo yaizivikanwa senzira yekushandisa. Zvino pakati pekuti kune mamwe maLinux muchikoro uye izvo zvakawanda zvinozivikanwa nezvemakomputa, zvinoita sekudaro Linux haisisiri iyo huru isingazivikanwe chaive chii.
Tora mukana wepasi-simba makomputa: Nekutsakatika kweWindows XP, makomputa mazhinji ekare ave nherera. haigone kukwidziridzwa kune yakasimba Microsoft system sezvo kusvetuka mune zvidiki zvinodiwa kwakakura, sezvo yakabva pamamegabyte makumi matanhatu emakondohwe muXP kuenda pa64 GB yegondohwe muWindows 1 (7 gigabytes inokurudzirwa nekuti ne2 iri rakapusa bhokisi). Neichi chikonzero, anoshanda masisitimu akadai Arch Linux vanogona kudzoreredza aya makomputa ekare uye voaita anobatsira uye akatsigirwa.
Yemahara uye yemahara software: Chekupedzisira asi chisiri chidiki, Linux yemahara software. Makambani mazhinji uye akawanda ehurumende anosarudza kusarudza emahara mashandiro, kunyanya nekuda kweiyo mari yekuchengetedza.
Kunyangwe ini ndapa aya data, ndinofanira kutaurawo kuti panguva ino zvese izvi zviri kure. Chikamu che90% pamusika chakakwirira kwazvo uye zvinotitorera makore mazhinji kuti tisvike kwazviri, kunyanya nekuti Microsoft ine mari yakawanda uye rutsigiro kubva kune vazhinji vagadziriAsi kana zvinhu zvikaramba zvichiitwa izvi mushe, ndine chokwadi chekuti rimwe zuva vachakundwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Linux yaigona kukunda maWindows muvashandisi here?
Ndiri kutogadzira yangu yemuchina XD muchokwadi uye chokwadi ndechekuti ndiri kufadzwa nemhepo (ndosaka ndichizviitira iyo salon fungidzira)
pamusoro pazvo ndinozviita nekuda kwangu izvozvi ini ndiri gare gare iyo r9 390
biostar mini itx x88zn bhodhi
16gb gondohwe x2 2400mhz
sx600-g sirivheri (600w)
kuva ani rock lp (fan)
nt-h1 (mafuta anodziya)
yakazara € 500 (kutsvaga yakanakisa pamutengo wakanakisa)
uye mukati memwedzi mumwe kadhi rakazvitsaurira saka ndichatora mukana wevolkan al max nekuda kwekusanganiswa kweapu uye neakazvitsaurira
Muchina wakanaka hongu changamire, ndaidawo kuita tsika asi gare gare.
Tora mukana weKisimusi kuti kuchave nekutengesa pane chiutsi.
Zvinosuruvarisa kwete, kubva kune yehunyanzvi fucking nzvimbo yekutarisa, Ubuntu ndicho chinhu chiri nyore pane isu, zvisinei pane zvinhu zvisingapedze kushanda nemazvo, pane dzimwe nguva mushure mekuvandudzwa kune maficha anopunzika kana kuti mune nyowani vhezheni ivo vanonyangarika zvakananga uye Hazvichakwanike, imwe pfungwa inondinetsa ndiyo spidhi, kune mumwe munhu anongoda chete kuona facebook vanotora nguva yakareba kuti vavhure mabhurawuza kekutanga mushure mekubatidza michina, iyo ine kunonoka kushoma ndeye FF, inofanirawo kuzivikanwa kuti kudzima uye kudzima system yemureza kuri kukurumidza, iwe unogona kuwana zvakafanana mu linux asi iwe unofanirwa kuisa zvinyorwa kuti umise hibernation uye hybrid kumiswa, asi kwete ese makomputa anoshanda nemazvo, uye chimwe chakakosha kwazvo, hapana chakanakira kuti chinotaridzika kushanda kana kutanga kuri kwakaipisisa, zvinoenderana nekadhi revhidhiyo vamwe vane mavara akapfava vamwe vachidzedzereka kuti vawane kuwanda uye saizi yekumashure yechidzitiro.
Vanhu havana basa nekuchengetedzeka kana kuvanzika, kana vakajaira kune chimwe chinhu chine bhatani ipapo, hazvingambotsigire application ine bhatani kunyangwe ikaita zvakafanana asi kune rimwe divi rekona, tisingataure zvese system iyo inoshanda nenzira yakatosiyana uye nemaapplication ari mune zvimwe zviitiko anovhiringidza vatsva, nekuti ivo vanoitwa kuti vashande uye havana kuitirwa kuti vashande zvine ushamwari
Chekupedzisira, aesthetics, hapana kana rimwe remadhesiki rakatsanangura kusiyanisa, zvinogara zvichidhura kune avo vedu vane cathode ray monitors kuti vaone mamwe mafomu anoita kunge akagadzirwa negirazi rinokudza, zvinoitika kwandiri nezvikumbiro zveKXStudio zvinoverengeka kusvika Ini handikwanise kuverenga zvinyorwa mune dzimwe nguva, chinhu chakanakisa ndeye KDE kubva mumaonero angu, kunyangwe ini ndaona rimwe dambudziko nekuratidzwa kwetypography neLCD monitors izvo zvinofanirwa kunge zvine mhinduro asi iwe unofanirwa kuzviita neruoko. Zvirinani izvi ndizvo zvandinoona, aimbova mushandisi windows uye makore mashanu apfuura; anoshanda chete neLinux
Ndingadai ndisina chokwadi. Tarisa uone chinyorwa changu chazvino, icho chiri mukirasi chiito chekupokana neMicrosoft pamusoro peW10.
Chaizvoizvo chinhu chakakamurwa nepakati neichi cheWindows, mumhando mbiri dzevashandisi.
1.Mushandisi mushandisi: Munhu akajairika munhu asingazive chero chinhu pamusoro pemakomputa, ivo vanoda iyo pc yekupinda Facebook uye kutamba Minecraft, ivo havana hanya nezve zvakavanzika uye ivo vanongoda yakanaka desktop uye zvivakwa.
Mushandisi wemberi: Vanhu vazhinji vanoziva makomputa. Vanhu vanoziva sekuvanzika, kutonga uye kugadzirisa, izvo zvinopa Linux kwete Windows.
Chinhu ndechekuti kune vashoma uye vashoma vorudzi 1 vashandisi, vanozivawo zvishoma mazuva ese (ikozvino zvirinani vanovadzidzisa kuchikoro kuti Linux iriko)
Kunyangwe, nokutendeseka, chero sisitimu yekushandisa ichakushandira iwe kuti upinde Facebook, kunyangwe Windows XP kana Puppy Linux.
Ah uye kwete iyo isingazivikanwe desktop inoitika kwauri, sezvo Linux desktops inogona kugadziridzwa kune yaunoda.Kunyangwe rimwe zuva ratakataura nezve kugona kuisa dingindira rew10 kana distro yakafanana neW7
Ndanga ndichishandisa Linux seOS chete kweanopfuura makore matatu
Zvinoita senge kwandiri inoshamisa OS asi pane chimwe chinhu chandisingade, uye iko kushomeka kwechiyero mukati, zvirinani mune chimwe chinhu chandinoona chakakosha.
Iyo imwechete yekumisikidza faira fomati, mumawindows mune .exe, asi mu linux mune dzakasiyana siyana, .deb, .rpm, nezvimwe.
Ndine pc isina Indaneti uye kana ndichida kuisa chimwe chinhu ndinopenga, vagadziri vazhinji vane akati wandei .deb uye .rpm asi havazi vese vanazvo.
Pane zvinoshandiswa zvinondimanikidza kurodha pasi .tar uye kuumbiridza (Izvo zvinoshungurudza kakawanda)
Ndoziva kuti kune zvirongwa zvinoshandura tar kuita .deb nezvinhu zvakadaro, asi zvingave zvinonyanya kushanda uye zvaizovandudza mukana weLinux zvakanyanya kana vatambi vakuru vakasarudza muyero uye voita kuti zvinhu zvive nyore kune vashandisi.
Kwaziso, zvakanakisa zvinyorwa.
Icho ichokwadi, ndosaka ndichiisa zvese zvandinogona nemirairo. Kunyangwe kusiyana kweLinux iri poindi yakasimba, zvakare iri poindi isina kusimba munzira yayo, nekuti dzimwe nguva kune ngura yakaipa kwazvo uye makwikwi mukati memharaunda.
Kutenda nerutsigiro rwako nekwaziso.
Mashoma mapakeji andakawana izvo asiri eangu distro, nenzira, iwe unoziva mutorwa?
Nezve maPC asina kubatana kweinternet, idambudziko, asi chokwadi ndechekuti mamwe masisitimu ari kubhejawo pamusika we 'musika', saka matambudziko neaya masisitimu anogona kunge akatonyanya.
Kana ini handina kusangana nemashandisirwo mazhinji ANOFANIRA KUSANGANISWA, kunze kwekunge chiri chinhu chinoedza kwazvo uye beta.
Chero zvazvingaitika, haufanire kuona kuumbiridza chishandiso sehurema asi semukana wekumhanyisa zvirongwa pamapuratifomu paasina 'kutsigirwa zviri pamutemo', semuenzaniso, ini ndakaisa emulators akati wandei we raspberry pi iyo mukufungidzira yakanga isiri ye chivakwa ichi.
rakashata linux haisi OS
rimwe rematambudziko akawandisa mafomati emafaira kusanganisira nzira yekuisa, muzviitiko zvakawanda nembugs. Zvakanaka izvo uye kuti chakareruka makore kure nemahwindo, imwe yeedzo bvunzo, inoshanda zvirinani pane windows pane linux uye zvese pakutanga
ichokwadi, haisi OS zvakadaro….
Kana iri chechipiri, ini handibvume zvakanyanya, ini ndinoshandisa steam pane linux uye inondishandira pasina matambudziko.
Parizvino handisati ndambove nezvinetso nezvirongwa zvandinoisa muLinux, kunze kwekunge, zvimwe, imwe pasuru iyo isisina rutsigiro uye nekuda kwechikonzero icho ini handikwanise kuiisa zvakananga.
Kunyangwe makore maviri apfuura. Ndichiri kuyedza linux, ini ndakaisa WOW paWINE uye yakashanda zvakatsetseka kupfuura paW7 pachayo.
@azpe chaizvo unofanirwa kunge uri mushandisi weWindows kuti uone nyaya yemusiyano uye mitsara yakanaka inotsanangurwa, ndinoziva, iwe uchandiudza sekutaura kwangu, ndiani ane hanya nezvezvinhu zvisina musoro uye zvisina musoro, zvisinei vanhu vakapusa haha, ivo unoda kuti itaridzike, asi uchaitei,
Ini handizive nezve Win 10, chinhu chekupedzisira chandabata iXP, uye kamwe kanomwe asi zvishoma uye hapana, ko dai ndakashamisika mune zvese zviitiko, ndeyekuti Chrome inovhura ipapo, uye mune linux .. naMwari athlon x250 ine 4 gondohwe pane nguva dzinotora gumi nemaviri kana anopfuura masekondi, asi zvakanaka ndinogona kuzvitakura, asi kwete zvimwe. Kwaziso
Edza dingindira rinokutendera kuti uwedzere musiyano, zvirokwazvo une zvakawanda (kunyangwe madingindira anoteedzera kutaridzika kweWXP).
Izvo zvinotora kutanga ndezvechokwadi, asi izvo zvinoita kwandiri kunge iri mhosva yeGoogle kwete Linux, iyo inopa basa rakawanda (zvine musoro nekuti ivo vashandisi vazhinji), kune iyo Windows vhezheni.
zvinosuwisa kuti mu linux hazvigoneke kutamba chiutsi chine mashandiro mashoma pane kuhwina 10 ndakaedza zvakawanda kushandisa linux asi windows sekugara kuchipfuura uye ngatiregei kuzvinyengera asi ine mashandiro akanaka windows kupfuura linux michina yemhepo iri crap iyo kuita kwakadzikira zvakanyanya pane kutamba mumahwindo pamwe mune ramangwana isu tinogona kushandisa linux.
jose barrier pfumo akadaro
Kwazisai, yakanakisa chinyorwa, ndinoshandisa pirated win 8.1, sezvo ndisisakwanise kubhadhara marezinesi eMicrosoft aya awedzera kukundikana kubvira win7 ikozvino mubvunzo wakananga wandinobvunza ndewokuti, ndeipi sisitimu yandinofanira kushandisa, ichokwadi kune akawanda mapurogiramu emahara ayo Ini ndinogona kushandisa linux, asi ini ndichiri kushandisa maficha e windows, ndeipi linux OS inoita kunge windows yandinogona kushandisa, ndinoti ndinonyora izvi sezvo chingave chikamu che newbie, ini ndakamirira mhinduro yako uye nhungamiro, kwaziso uye kuenderera kubudirira
Pindura kuna Jose Barrier Espada
Iwe une akati wandei sarudzo dzaungashandisa. Chinojairika ndechekushandisa Ubuntu kana Debian nekuti ngatiti ndivo vakuru, asi zvino zvinoenderana zvakanyanya kana zvishoma pane izvo zvauri kutsvaga.
Shanyira ichi chinyorwa chakaitwa nemumwe wangu nezve Zvakanakisa kugoverwa kweLinux maunogona kusarudza iyo yaunoda zvakanyanya.
Ini ndinofunga vanhu ava vakamirira linux kuti iite kana kuzvibata kunge windows yakadaro application inoita chaizvo kana yakaiswa senge mumawindows, ndinofunga vanofanirwa kufunga kuti izvi zvakasiyana zvakanyanya, ndichangopedza makore matatu ndakadzosera windows mu sony vaio nekuti Pamwe ini ndakafunga kuti iyo Laptop skrini yainge yakaipa uye ini ndakadzoreredza win3 uye zvakanditorera anenge maawa mana kuti ndiise, anga akaita sei maDVD matatu (system yekudzosa DVD nezvimwe zvinhu), makambani aya akaisa yakawanda junk software pairi, kiyi yakatsaurirwa iyo inoenda yakanangana nesony peji, kutaurirana nasony vaio, uyezve mushure mekuisa zvese izvo zvandinoona kuti girafu rinozvibata zvakafanana neinux zvakanaka haina kumbobvira yanyorova, pandakangotenga win2 laptop haina kuramba 4 maawa uye Pakarepo dzima uye gadza ubuntu asi sezvazviri amd havana kumboenda zvakandinakira uye kubva pane chiitiko ichocho Intel ndeyangu anoita zvakanakisa
Dambudziko hombe randinoona kuwanda vashandisi veWindows inertia, sezvo GNU / Linux iri mhando yepamusoro zvakanyanya uye iwe unogona kuita zvese nazvo pasina kushaya Windows zvachose.
Uye nezve rutsigiro rwezvinhu zvese zvagara zvichindishandira, pamwe zvinokanganisa kuti ndisati ndatenga ndinozvizivisa kuti zvinhu zvinoshanda kune yangu system, sekusaita kwandakaita dhiziri kumota yangu yepeturu uye painokundikana ndinoti imota crap. Zviri pachena.
kune izvi zvese…. Nei uchifungisisa neWindows? Ini ndaizogadzirisa kuti igadzikane uye kunyatso kuvandudza vhezheni neshanduro
Ehe, Steam budiriro maererano nemugove wemusika, tinoiona mwedzi wega wega muhuwandu hweValve: kukura kusingamisike. Uye zvekutaura nezve kupihwa kwemitambo uye mashandiro ... kana uri kuzondiudza, muhupofu hwako, kuti Linux inodarikawo Windows mune izvo? Ndapota…
Uye ini ndinokuudza kuti ndinofadzwa neSteam uye handitombotanga Windows, nekuti nezvose zvandinofanira kutamba izvozvi ndiri kufara. Asi iwe haugone kuona nyika nekushomeka kwevechidiki kwekusaziva.
Mitambo yeStam iri nani paWindows kupfuura Linux, uye hazvisi izvo zvandinotaura, ndezvekuti ivo vatoita bvunzo uye vapa iwo mhedzisiro. Asi ini ndaizoda kuti iende neimwe nzira kutenderera.
Windows haisi mitambo chete, ibasa. Ini ndinoshandisa Windows nekuti chero Linux OS haina kundishandira nekuda kwebasa rangu, Graphic dhizaini uye dhizaini, asi vamwe vachati kune zvirongwa zve izvo muLinux uye hazvina kuita sekuti haugone kuenzanisa iwo akati mapurogiramu neaya arimo muWindows. semuenzaniso Twinmotion, Autocad Architecture, Revit, Archicad, Lumenrt, nevamwe vakawanda. Ndakaedza linux ndikaona ichifadza asi handizvo zvandaitsvaga pabasa rangu.
Kunyangwe windows ichipfuura musika zvinondikosha *** Linux Is Unknown In Chile, Also Linux beats Windows AND Mac By More Than Triple !!!
Zvakanaka, ndinofanira kutaura nezve zvakaitika kwandiri. Ndiri parizvino Linux Mint 17.3 X64 mushandisi uye ndanga ndichiishandisa gore rese. Inoenda inoyerera, yakanyanyisa kuyerera uye kuti ini ndine rakapotsa nepakati timu: AMD Athlon II X2 240e ine 4 DDR3 RAM ine PCI inoratidza ATI 6670 DDR5. Komputa yangu inoita mushe mushe kana uchiisa nekuvhura zvirongwa. Ini ndinoshandisa iyo MATE neCinnamon maficha.
Munguva yakapfuura ini ndakatanga neUbuntu 5.10 uye ndaida iyo. Ndakaedza Mandriva (Munguva yayo yakanakisa distro), Fedora uye PC Linux (Nice nice) Ehe ndinoziva maMS masisitimu zvakakwana mune ese mavhezheni nekuti ini ndakatsigira vanhu vazhinji mazuva ese. Zvakare makore apfuura ini ndaive neMac PowerPC G4 (iyo inoita kunge zai jena) uye ndinorangarira kuti ini ndakaisa Ubuntu 6.10 yePowerPC uye ndakaifarira zvakanyanya zvekuti ndakakanganwa kushandisa Mac system.
Ini munguva pfupi yapfuura ndakavaka Kodi varaidzo sisitimu yemutengi uchishandisa Raspberry Pi 2 uye inofamba zvakanaka. Varaidzo isingaenzaniswi uye inonaka kwazvo, dzakasiyana uye nekugadzirisa.
Nguva pfupi yadarika ndapa chipo kuMozilla Foundation kutsigira Firefox.
Ini ndatorawo mutoro wekuti vanhu vasvike pakuziva chimwe chinhu nezveLinux uye kune vatove vanoverengeka vandikumbira kuti ndiise software, nekuti zvirinani vanoshandisa michina yavo nenzira yakajairika uye kwete yenzvimbo dzekuvaka kana graphic dhizaini. Zvikuru zvekuti rimwe zuva murume akandibvunza maitiro ekuzvidzivirira zvirinani kubva paInternet nekuti ainzwa kutyorwa uye nekumwe kutya kwekuvanzika kwake. Ndakamupa imwe nzira yekushandisa Miswe kana Linux ine firewall uye tor browser uye kwete hazvo kuti ipinde yakadzika kana zvinhu zvakadaro.
Ini ndaizoita inotevera fananidzo.
Linux yakaenzana nekirabhu yenhabvu izere nematarenda ayo achiri kubva kukwari uye iro rimwe zuva richashandisa zvakanakisa zvavo pasirese.
Mahwindo murume anozivikanwa mutana, kwaari iko kusaziva kwakazara kunotendeukira kune inertia.
Mac murume akapfuma kwazvo, asi sepanyika, vapfumi vashoma ...
Ini zvakare ndinofunga icho chikamu chebudiriro kushambadza iyi yese huru nyika yemahara software asi mumatanho madiki pasina kuve nekukurumidza uye pasina kushoropodza kukwikwidza. Ini ndinofunga kuti budiriro iri kukura uye kiyi ndeyekuremekedza anopikisa uye ndoda kuziva nzira yekuita gomba diki kune chakanaka, simbisa iro gomba diki wobva warikurisa zvishoma nezvishoma.
Kutarisa kune ramangwana, ndiri kutarisira Kernel 4.4 uye Ubuntu 16 LTS uye ese ma distros anozowana kubva kune ese ari maviri. Icho chiratidzo chinonakidza chekufambira mberi. Nhau nekubatanidzwa kwegore rino uye ne 2017 kuwedzera.
MaGeek haatombo nzwisisa kuti kushambadzira kwakakosha kupfuura chigadzirwa. Vaya venyu vasina kuona 1995 windows mushandirapamwe havakwanisi kunzwisisa kuti chigadzirwa chinoiswa sei muhuwandu hwevanhu. Ko zvaJobs ne iPhone yake zvaisava chinhu uye zvishoma padhuze nazvo. Iyo chete Linux ine chero kushambadzira yaive Ubuntu uye yakawana imbwa.
Pindura kuna Hon
Manheru akanaka, ndinoda kuziva kuti chii chakavakirwa muzana re data rekushandisa kweSO´S, nekuti ndiri kugadzira chirongwa cheiyo fakitori uye ini ndaizoda dhatabhesi dhizaini yekunditungamira. Iyo projekiti inonzi Windows vs Linux